News - The 7 nke Taizhou International Electrothermal Technology
Nke asaa nke Taizhou International Electrothermal Technology
Site na November 1st ruo 3rd, 2019, a na-eme 7th Taizhou International Electrothermal Technology and Equipment Exhibition na Taizhou International Expo Center. A kpọrọ Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. ka ọ sonye na ihe ngosi ahụ ma gosipụta ngwaahịa ndị ọhụrụ. Anyị na-egosi nka ọrụ, nlepụ anya n'ihu, na ịdị irè nke nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi maka teknụzụ na ngwa elektrmal.
Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. jiri ohere a mee ihe zuru oke iji sonye na mgbanwe dị omimi, mkparịta ụka, mmụta na nghọta nke ihe ndị dị elu nke ndị ahịa na atụmanya maka silicon carbide kpo oku ihe na gburugburu ebe obibi kachasị ọhụrụ, anyị nwere ruru ihe mgbaru ọsọ nke zuo okè anyị onwe anyị na ngwaahịa, na-agba mbọ anyị uru, na mma ga-eme n'ọdịnihu na ngwaahịa. Ihe ngosi a emeela kawanyewanyewanye mmetụta nke ụlọ ọrụ ahụ na ewu ewu na otu ụlọ ọrụ ahụ, ma nwee nghọta miri emi karị na nke zuru ezu banyere ụlọ ọrụ ndị magburu onwe ha na otu ụlọ ọrụ ahụ, ya mere, a na-enwe ihe ịga nke ọma na Taizhou International Electrothermal Technology and Equipment Exhibition nke ọma!
N'ime ihe ngosi a, anyị gosipụtara ihe ọhụrụ silicon carbide pụrụ iche anyị na-ekpo ọkụ maka ịsa ahụ iko mmiri na nnukwu ihe ọkụkụ carbon carbon na-ekpo ọkụ maka 1625 Celsius C.
Na usoro mmepụta nke iko mmiri, ebe ọ bụ na ihe ọkụkụ carbon carbon na-ekpo ọkụ dị na nnukwu ụlọ ịsa ahụ batrị ogologo oge, enwere ihe siri ike pụrụ iche maka silicon carbon kpo oku maka bat bat. Ohaneze, sịlịkọn carbide kpo oku mmewere ike idi corrosion nke elu okpomọkụ na corrosive gas. Yabụ, ihe ọkụkọ na-ekpo ọkụ nke silicon maka bat ahụ ga-enwerịrị ihe ọkụ ọkụ na-adị elu na ndụ ogologo ọrụ.
N'ebe ụfọdụ siri ike, ndị ahịa nwere oke nlezianya chọrọ na ihe achọrọ maka kpo oku nke sịlịkọn carbon kpo oku. Dị ka nke a si kwuo, SICTECH silicon carbon kpo oku mmewere mepụtara ultra-elu okpomọkụ sịlịkọn carbon kpo oku mmebi nke gafere nkezi silicon carbon mkpanaka okpomọkụ nke 1500 ° C, nke mere na ya na-arụ ọrụ okpomọkụ ruru 1625 ° C! Na iji nye ndi ahia ihe di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di elu, HD ihe di elu nke kpo oku di egwu, HD akwa aru di elu.
Threebọchị atọ nke Taizhou International Electric Heating Technology and Equipment Exhibition dọtara ọtụtụ ajụjụ n'aka ndị sonyere. Ndị ọrụ Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd jupụtara na ịnụ ọkụ n'obi na omume dị oke mkpa, yana azịza ụlọ ọrụ ọkachamara. Onye ndụmọdụ ahụ kọwara ụkpụrụ ọrụ nke silicon carbide kpo oku, iji nlezianya na ihe ndị ọzọ. Site na arụmọrụ zuru oke, ngosi vidiyo, wdg, onye ndụmọdụ nwere nghọta zuru oke na mmata nke ngwaahịa anyị.
Site na Taizhou International Electrothermal Technology na Equipment Exhibition, anyị zutere ndị ahịa, ndị nkesa na ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile. Anyị ghọtara ma mụta teknụzụ na echiche ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ eletrik. Anyị maara na anyị nwere ike inye onyinye ka ukwuu na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ na nchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi. Anyị nwere nghọta miri emi banyere ibu ọrụ na ọrụ anyị ga-ebu. Ekwenyere m na anyị ga-aga n'ihu n'ụzọ siri ike, ma na-aka mma!